Fah Faahin: Dekadda Boosaaso oo Caawa si Kumeel Gaar ah u shaqa Bilowday (dhegayso+Sawiro) – Radio Daljir
Noofember 2, 2017 6:44 g 0
Waxaa Caawa Dib u furmay dhaq dhaqaaqi ganacsi ee Dekadda Boosaaaso kadib Markii maanta Heshiis hordhac ay gareen ganacsatada dooonyaha iyo Maamulka dekadda Boosaaso ,iyado mudo toban beri shaqada dekadda sideedi Horre ku soconayso.
Qaar kamid ah Wwariyaasha Radio daljir oo tagay dekadda Boosaaso Caawa ayaa soo arkay doonyo gaaraya 6 doonyo oo bagaash kala duwan sidda oo kuso xirtay Marsadda Boosaaso,iyado caawa la sugayo sido kale in doonyo kale oo ganacsi inay kusoo xirtaan marsaddan.
Dhinaca kale Qaar kamid ah dadka Muruq maalka ah ee kaso dajiya Doonyaha Agabka saaran oo Radio daljir la hadlay ayaa sheegay inay ku faraxsanyihiin in howlihii dekadda Boosaaso dib u furmaan ,iyago tilmaamay inay maalmahay xirnayd dekadda walwal xoogan ay qabeen.
Warbixin Wariye Xasan Heykal ayaa kadiyaariyeey howlaha shaqo ee dekadda ee dib u furmay.
Hoos Kadaawo Sawiradda an ka qaadnay Howlaha shaqo ee socda Caawa